China Ibhodi yebhokisi esongelweyo ye-Super C1S / ibhodi yegolide ye-GC1 / Ubuninzi obuPhezulu kuLuhlu nakwiphepha lekhonkco mveliso kunye nabathengisi | IPHEPHA ELIQINISEKILEYO
Ibhodi yebhokisi ye-Super C1S esongelweyo / ibhodi yeempondo ze-GC1 / Ubuninzi obuphezulu kuLuhlu nakwiPhepha
Umgangatho ophezulu weMpahla eluhlaza, i-100% ye-Wood Pulp, i-Good Tenness.
Zisongelwe ngeengcamba ezi-3 zephepha le-liner eyomeleleyo e-PE.
Ifilimu ye-OPP isongelwe, ibhentshi kwipallet eyomeleleyo yomthi, ii-angles ezi-4 zikhuselwe yibhodi yebhokisi.
3: Ukupakisha kweReam
Iiphepha ze-100 ezisongelwe ngephepha elomeleleyo le-PE camera, eliboshwe kwiipelethi zomthi ezinezikhuselo ezi-4.
4: indlela ukupakisha elicwangcisiweyo
Itekhnoloji yemveliso egqwesileyo, ukusetyenziswa kwezinto ezisemgangathweni ezikrwada, ukuqina okuqinileyo kunye nokuqina, ukuqina okuphezulu kunye nobuninzi, ukusebenza kakuhle kwebhokisi yokusika;
Mhlophe High, imibala ezinzileyo, ukutyabeka entle, ukunciphisa elungileyo nkqu kunye noshicilelo ichaphaza;
Inking eyomeleleyo kunye neMpembelelo yokuPrinta eyiyo.
Ukuqina okuzinzileyo, umphezulu ogudileyo kunye noethe-ethe, umbala oqinileyo.
Ukuhambelana neemfuno eziqhelekileyo zezixhobo zecuba
Ukuxhotyiswa ngeengubo, ezifanelekileyo ukushicilela zonke iintlobo zamatyala e-cigarette e-upscale
Ukuncitshiswa okuhle kwichaphaza lokushicilela, ukomelela komphezulu kunye nokwenza ibhokisi-ukufaka isicelo kwisantya esiphezulu sokupakisha imidiza
Umphezulu wephepha eligudileyo nelicolekileyo, unyamezelo oluphezulu lokusonga, ukukhusela ukukhutshwa ngaphandle komonakalo;
Ukuqina kwaye kubuthathaka, kuQinisekile kuQinisekile, ngokwaneleyo, ukusebenza okungagungqiyo kunye nokubumba
Ukutyeba ngokuqinileyo, iphepha elithe nkqo, usetyenziso olubanzi.
Zisongelwe ngee-3 zomaleko iphepha le-PE eliqinileyo elityunjiweyo.
Ibhodi yeNdlovu esongelwe ngebhokisi yePhepha
Ukuqina (MD / CD)
Isithsaba / 4.0
Ubuso 91 ± 1.5 Emva 91 ± 1.5
Ubunzulu bomhlaba obushicilelweyo
I-170/90 gsm - iphepha lengxowa, iibhokisi zezipho ze-Upscale, ikhadi lesimemo, amaphetshana okupapasha kunye nekhadi leposi, iitagi zokuxhoma, iingxowa zokuthenga
210/230 gsm ---- ukushicilelwa kombala kwemveliso ye-slap-up: iphakheji yecigarette yomgangatho ophakathi kunye nomgangatho ophezulu, amayeza, amakhadi oshishino, ukutya, iiposikhadi, i-origami, iphakheji yobisi, iphakheji yesiselo, ikomityi yephepha elahlwayo, indebe yeti yobisi, isaphetha sephepha
I-250 gsm --------- ibhokisi yesipho esikwinqanaba eliphezulu, ibhokisi yezithambiso, ialbham yokwazisa, ikhalenda
I-300 gsm ------ ibhokisi yebhokisi ekumgangatho ophezulu, ibhokisi yokudlala, ibhokisi yemveliso yokhathalelo, ibhokisi yemveliso yokhathalelo lwempilo, ukupakishwa kwemveliso ye-elektroniki, ibhokisi yeyeza
Ezi Ngcebiso zingasentla zibhekisa kuphela, ngokweemeko zakho.
Egqithileyo Ukutya okuphezulu kwebhodi yebhodi yendlovu ye-OEM / iphepha leBhodi le-SB
Okulandelayo: Ukuthengisa okuTshisayo sze okwenziwe ngexabiso elifanelekileyo kwiBhodi yeBhokisi yokuSonga
iphepha lokusonga elininzi
Ibhodi yeNdlovu ePhakamileyo